Hard Liner, Soft Liner
Home » Critic » Hard-Liner နဲ့ Soft-Liner
Posted by Zaw Thant on Jul 16, 2013 in Critic, Myanmar Gazette, Politics, Issues, Think Different | 43 comments
hard liner soft liner ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
..ဂေဇက် ရွာသူ ရွာသား အားလုံး မင်္ဂလာ ပါဗျား.. ဒီတစ်ခါတော့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကို ကိုယ်မြင်သလို တံဆိပ်တပ် ဘောင်ခတ် စွပ်စွဲ ထားတဲ့ စာစုလေး တင်ချင်ပါတယ်.. အမှန်တော့ ဒီတစ်ခါတင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ စာစု ကသက်သက်ရှိတယ်.. ယုံကြည်မှု၊ ဘာသာရေး နဲ့ သိပ္ပံ အကြောင်းစဉ်းစားမိတာ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ရေးဖို့ပဲ.. ဒါပေမယ့် တစ်လုံးမှလည်းစမရေးရသေး၊ ရေးရမှာလည်း ဟိုတစ်စဒီတစ်စ ဆိုတော့ ဒီတစ်ပါတ်ရေးဖို့ကို လက်လျှော့လိုက်တယ်.. အဲ့ဒီ့အစား ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်တုန်းက လက်ဆော့ထားတဲ့ အခုစာစုကိုပဲ တင်ချင်တယ်.. လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးလ ကရေးမိတာဆိုတော့ အပြောင်းလဲမြန်နေတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ပြည်သူတွေနဲ့ အခုအချိန်ကိုက်ပါတော့မလား လို့တော့ စဉ်းစားမိပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သိပ်လည်း ဒိတ်မအောက်သေးပါဘူး လို့ယူဆတာရယ်.. ရွာသူ ရွာသားတွေ ရဲ့ အမြင်ကို နားထောင်ချင်တာရယ်ကြောင့် အခု နည်းနည်း ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပြီး တင်ဖြစ်သွားပါတယ်..
အသက်နည်းနည်းကြီးလာ၊ ဖတ်ဖူးတွေ့ဖူး တာတွေများလာတော့ အတွေးအမြင်က နည်းနည်းပြောင်းချင်လာတယ်.. ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလို အကောင်းကတစ်ဖက်၊ အဆိုးကတစ်ဖက်၊ နောက်ဆုံး မှာ အမှန်တရားက အနိုင်ရ ဆိုတာထက် အပြင်လောကမှာ ပိုရှုပ်ထွေးပြီး လွယ်လွယ်တွေးလို့မရတာတွေ တွေ့လာရတယ်..
ပထမဆုံးသတိထားမိတာက လူတွေ၊ အဖွဲအစည်းတွေရဲ့ Role ပါ..
အရင်တုန်းကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထက် ပြည်သူတွေဒုက္ခခံနေရချိန်မှာ ပြင်ပသတင်းဌာနတွေက ပြည်သူတွေနဲ့တသားထဲရှိကြောင်းတွေပြော၊ အစိုးရကိုအမျိုးစုံ တိုက်ခိုက်၊ ဝေဖန်မှုတွေလုပ်တော့ ဒီလူတွေအမှန်တရားဖက်ကရှိတယ်၊ အမှန်ဖက်က တိုက်ခိုက်ပေးတယ်ပေါ့..အကောင်းဖက်ထဲ ထည့်ထားလိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် တလောက ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလီကိစ္စကျမဟုတ်တော့ဘူး.. ပြည်သူတွေရဲ့ အမြင်ခံယူချက်နဲ့ ပြင်ပမီဒီယာတွေရဲ့ အာဘော်၊ Lead လုပ်တာက ဆန့်ကျင်ဖက်.. အဲတော့ ဒီကောင်တွေမကောင်းဘူးဆိုပြီး မကောင်းစာရင်းသွင်းရမလိုဖြစ်ပြန်ရော။ အမှန်ကတော့ အရင်က ကောင်းပြီး အခုမှ ဆိုးလာတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အစကထဲက သူ့ Role အရ သူ့ဟာသူ လုပ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်.. သတင်းမီဒီယာတစ်ခု အနေနဲ့ သူအပေါ် အထောက်အပံ ဒါမှမဟုတ် လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ Influence ပေါ်လိုက်ပြီး သတင်းတွေက ဘက်လိုက်မှု အနည်းအများ ရှိနေမှာဖြစ်တယ်..အဲဒီအပေါ် အချစ်အမုန်း ကောင်းဆိုး ဆိုတာထက် ကိုယ်ဖက်က ဘယ်လိုပြန်တုံ့ပြန်မလဲ (positive or negative response) ဆိုတာပဲအရေးကြီးတော့တယ်..
အဲဒီ လူတစ်ဦးချင်း၊အဖွဲ့အစည်း၊နိုင်ငံတစ်ခုချင်းရဲ့ Role ကိုမြင်လာတဲ့အချိန်ကျ 100% အကောင်း၊ 100% အဆိုးဆိုတာမရှိတော့ပဲ နည်းနည်းချင့်ချိန်လာနိုင်တယ်.. လူတစ်ယောက်၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ကိုယ့်ကြိုက်လုပ်ပေးတဲ့ အခါ အကောင်း၊ ကိုယ်မကြိုက်တာလုပ်တဲ့ အခါ အဆိုးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို Role နဲ့ သွားနေတာလဲ.. ကိုယ်ကရော ဘယ်သူတွေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိတွဲ လုပ်မလဲ.. ဘယ်လိုဆက်ဆံသွားမလဲ ဆိုတာမျိုးစဉ်းစားလိုပိုရလာတယ်.. (အမေရိကန် ကောင်းတယ်၊ တရုပ် ဆိုးတယ် ဆိုတာမျိုးထက် အမေရိကန် နဲ့ ဘယ်လို၊ တရုပ်နဲ့ ဘယ်ပုံ ဆက်ဆံသွားရမယ် ဆိုတာမျိုး)
နောက်တစ်ခုက ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ Hard Liner & Soft Liner ကိစ္စပါ
သဘောထားတင်းမာသူနဲ့ပျော့ပျောင်းသူ၊ ညှိနှိုင်းလို့ မရသူ နဲ့ ညှိနှိုင်းလို့ရသူ.. ဒီလိုပဲနီးနီးစပ်စပ်ပြန်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တိုဆီမှာရှိနေတဲ့ Hard Liner Soft Liner တွေနဲ့ သူတို့ ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကို အရင် နဲ့ အခု နဲနဲချင်း နှိုင်ယှဉ်စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်..
အရင်တုန်းကတော့ ရှင်းပါတယ် Hard Liner တွေချည်းပဲ.. အစိုးရဖက်ကလဲ လက်ထိပ်နဲ့ ကျည်ဆံပဲရှိတယ်.. ပြည်သူကလဲ လက်နက်မဲ့ချင်းသာဆို လုံးသတ်မယ့်လူချည်းပဲ.. ဒေါ်စု၊NLD၊ဂဂ၊ပြည်ပမီဒီယာ စသည်ဖြင့်က ပြည်သူဖက်ကပေါ့ (အကောင်းဖက်ကပေါ့).. ၂၀၀၈-၂၀၁၀ ဝန်းကျင်က နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲစချိန် ရှေပြေး Soft Liner တချို့ရဲ့အသံတွေကြားလာရပေမယ့် ပြည်သူတွေသိပ် အကြိုက်မတွေ့ကြသေးဘူး.. အချစ်အမုန်းအခြေမခံပဲ ပေးထားချက် (လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေ နဲ့ ပေးထားတဲ့အခွင်အရေး) နဲ့ အကောင်းဆုံး အဖြေထွက်အောင်တွက်ဖို့ပြောတာတွေ၊ အစိုးရကိုလဲ အပြုသဘောချဉ်းကပ်မယ့် Approach တွေ၊ လူမပြောင်းတာထက် မူပြောင်းတာကို လက်ခံဖို့၊ ရသလောက်အသုံးချဖို့ တိုက်တွန်းတာတွေကို ကြိုက်သူ၊မကြိုက်သူရော၊သိကိုမသိလိုက်သူရော ရှိခဲ့တယ်။
အခုအချိန်တော့ အစိုးရဖက်ကော၊ အတိုက်အခံ+ပြည်သူဖက်မှာပါ Hard & Soft ဖြည်းဖြည်းချင်း ကွဲလာတာတွေရပါတယ် (ကွဲလာတယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးပေမယ့် မျဉ်းတစ်ကြောင်းရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကွဲတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အရောင်တစ်ရောင်ရဲ့ အရင့်အနုကွဲသလိုမျိုးနဲ့ပိုတူပါတယ်).. အပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့ Role ဆိုတာနဲ့တွဲစဉ်းစားရင် လူတစ်ဦးချင်းယူတဲ့ Role ပေါ်မူတည်ပြီး Hard, Soft ကွဲပြားသွားနိုင်သလို Hard ကနေ Soft ဖြစ် Soft ကနေ Hard ဖြစ် Adopt လုပ်သွားတာတွေ လဲတွေရပါတယ်.. (တစ်ချို့တွေ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဆိတ်လစိလုပ်ကြတာက သက်သက်ပါ)
အစိုးရ Hard > အစိုးရ Soft > common ground < အတိုက်အခံ Soft < အတိုက်အခံ Hard
ပထမဆုံး အစိုးရပိုင်း Hard ကို ပြောကြည့်ပါမယ်.. ဦးသိန်းစိန်က အစိုးရတွင်းမှာ ခေါင်းမာဂိုဏ်း ခေါင်းပျော့ဂိုဏ်း မရှိပါဘူး လို ထိမ်းပြောပေမယ့် အပြောင်းအလဲနဲ့မလိုက်နိုင်သူကို ချန်ထားခဲ့ရမယ် လို့ ဆိုပြန်တော့ ရှိတယ်လို့ ဝန်ခံတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်.. Hard ဖြစ်နေတဲ့အထဲမှာ အနားယူသွားပြီ ဆိုတဲ့ အဏာရှင်ဟောင်းတွေ၊ အသစ်သိပ်မကြိုက်တဲ့ အစိုးရ၊တပ်၊ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တွင်းက ရာခိုင်နှုန်းတချို့တွေ၊ ဝါဒမှိုင်း overdose ဖြစ်နေတဲ့ စစ်တပ်အရာရှိ တစ်ချို့တွေ ပါ ပါလိမ်မယ်.. သူတို့ရည်ရွယ်ချက်က သူတို့အကျိုးစီးပွားလုံခြုံချင်တာ၊ အပြောင်းလဲကို နှေးစေချင်၊ အပြောင်းလဲကြောင့်သူတို့ကို မထိခိုက်ချင် တာဖြစ်ပါတယ်.. သူတို့နဲ့ ညှိနှိုင်းဖို့ ထက် သူတို့ဆီက လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို မြင်နိုင်ဖို့၊ ပိုအင်အားကြီးမလာဖို့၊ ချောင်ပိတ်ထားသလို မဖြစ်ဖို့ စတာတွေ ကို သဘောပေါက်သင့်ကြပါတယ်..
နောက်တပိုင်းက နိုင်ငံရေးအပြောင်အလဲအစရဲ့အရေးကြီးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ အစိုးရပိုင်း Soft Liner တွေပါ.. ဦးသိန်းစိန်ကို ဒီမိုကရေစီဖခင်ကြီး ဆိုပြီး လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တစ်တန်းထဲထား ချီးမြှေက်တာတွေကို မျက်လုံးထဲကြည့်မရလှ မထောက်ခံပေမယ့် သူကို Soft Liner တွေထဲက ဦးဆောင်သူ၊ မျှော်လင့်လို့ရသူလို့ထင်ပါတယ်..သူနောက်ကလိုက်ပါမယ့် Soft သမားတွေ အစိုးရအဖွဲအတွင်း အနည်းအများပေါ်မှုတည်ပြီး အပြောင်းအလဲက မြန်ပါလိမ့်မယ်.. ဒီနေရာမှာ ပြည်သူတွေသဘောပေါက်သင့်တာက အစိုးရတွင်းက Soft Liner တွေယူထားရတဲ့ Role ပါ.. သူတို့နေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ Democratization (ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲရေး)ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရမယ့်အပြင် အနားယူသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုသစ္စာရှိရသလို သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေး၊ Stability၊သူတို့ထားခဲ့တဲ့ ကောင်းမွေဆိုးမွေ (ကောင်းမွေတော့သိပ်မရှိပါ) တို့ကို ထည့်စဉ်းစားရပါတယ် (ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် လက်ရှိအခြေအနေပါ).. ဒါကြောင့် တချို့ကိစ္စတွေ ပြည်သူအကြိုက်လိုက်တာ၊ ဒီမိုကရေစီဆန်ပေးတာ အမှတ်ယူရတာတွေ လုပ်နိုင်ပေမယ့် တချိုဟာတွေတော့ အရင်ပုံစံဟောင်းနဲ့ကိုင်တွယ်ရတာတွေရှိနေပါသေးတယ်.. ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ Role ကို သဘောမပေါက်ရင် ကိုယ်အကြိုက်လုပ်ပေးတဲ့အခါ လူကောင်းကြီးပါလားဆိုပြီး (အညှာလွယ်သူတွေက) ကြည်ညိုကြသလို၊ ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဆန်ကျင်တဲ့အခါ (သံသယကြီးသူတွေက) မင်းသားခေါင်းဆောင်းကျွတ်ပါပြီ ဆိုပြီး ဝူးဝူးဝါးဝါးထလုပ်ကြတယ်.. အမှန်တော့ ဘီးလူးလဲမဟုတ် ကယ်တင်ရှင်မင်းသားလဲမဟုတ်ပဲ သူ့ Role နဲ့ သူ ကပြနေရသူတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်..
အတိုက်အခံအင်အားစုနဲ့ ပြည်သူတွေဖက်က Soft Liner တွေအကြောင်းပြောရရင် ကစရမယ်။ သူပြောခဲ့တဲ့ ကျွန်မက ခေါင်းတော့ မမာဘူး၊ဒူးခေါင်းတော့မာတယ်၊ဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူး ဆိုတဲ့စကား ကိုကြားတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သွားသတိရတယ်.. ဗိုလ်ချုပ်တုန်းကလဲ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်၊ဂျပန်၊အင်္ဂလိပ် ခေတ်အဆက်ဆက် ဒူးထောက်အလျှောပေးတာမျိုးမရှိသလို ကွန်မြူနစ်တွေလို “တိုက်ယူလို့ ရမှလွတ်လပ်ရေးအစစ်” ဆိုပြီးလဲ ခေါင်းမမာခဲ့ပဲ တိုက်သင့်တာတိုက် အလျှော့အတင်းနဲ့ ညှိသင့်တာညှိပြီး ကြိုးပမ်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်.. အခုလဲ ဒေါ်စုအနေနဲ့ အစိုးရပိုင်းက မာတုန်းက သူဖက်က မလျှောခဲ့သလို့ အစိုးရဖက်က Soft Liner တွေပေါ်လာတဲ့အချိန် သူလဲလိုက် Adopt လုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွက်အလုပ်ဖြစ်မယ့် လမ်းကိုလျှောက်ခဲ့တယ်.. ဒါကြောင့် Soft Liner, Hard Liner ဆိုတာ ခံယူချက်ဘယ်လောက်ခိုင်မာတယ်၊ ယုံကြည်ချက်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာနဲ့မဆိုင်ပဲ အခြေအနေအပြောင်းအလဲကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်နိုင်သလဲ၊ ဆန်ကျင်ဖက်အင်အားစုတွေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ဆံရှင်သန်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ပိုဆိုင်ပါတယ်.. (ခံယူချက်မခိုင်မာပေမယ့် ညှိနှိုင်းလိုကို မရတဲ့ Hard Liner မျိုး၊ ခံယူချက်ခိုင်မာပေမယ့် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း ရှိတဲ့ Soft Liner မျိုးရှိတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ).. ဒေါ်စုရဲ့နောက် NLD နဲ့ တခြား ဒီမို ပါတီ တချို့၊ ပြည်သူအချို့ Soft လမ်းစဉ်လိုက်နေတာတွေရပြီး အားလုံးရဲ့ဦးတည်ချက်ကိုခြုံကြည်ရရင်
– အစိုးရ Soft Liner တွေနဲ့ တွဲလို့ရတဲ့အပိုင်းမှာတွဲပြီး ရသလောက် နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ (နိုင်ငံ့စီးပွားရး၊တရားဦးပဒေစိုးမိုးရေး etc)
– စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံကနေ ဒီမိုကရေစီပိုဆန်လာဖို့ (စစ်တပ်အခန်းကဏ္ဍ ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောရန်)
– အစိုးရတွင်းမှာ Hard တွေနည်းလာပြီး Soft တွေများလာဖို့ (စိုးရိမ်စိတ်များနေတဲ့ လူတွေ လျှော့လာပြီး၊ Democratization မှာတပ်၊ပြည်ခိုင်ဖြိုးကလူတွေပိုပါလာဖို့)
အဲဒါတွေကို ဒေါ်စုရဲ့ပြောစကား၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေထဲမှာတွေနိုင်ပါတယ်
“အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဖို့ တပ်မတော်အတွင်းမှ သတ္တိရှိပြီး အပြောင်းအလဲကို မကြောက်တဲ့လူများလိုအပ်”
“ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းမှာ တပ်မတော် အရေးကြီး”
ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးရွှေမန်း တို့နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံခြင်း၊ တခါတရံ အကောင်းပြောပေးတတ်ခြင်း
ပြိုင်ဖက်ပါတီဝင်များ၏ စကားအမှား၊ အပြုမူမှားများကို မတိုက်ခိုက်၊မနှိပ်ကွပ်ခြင်း (ဒေါ်စုသာ စကားပြောကောင်းကောင်းနဲ့ ပြိုင်ဖက်အမှားတွေကို ထောက်ပြရင်ဘာဖြစ်မလဲ? ပြည်သူတွေကတော့ လက်ခုပ်တဖြောင်းဖြာင်းနဲ့ အားပေးကြေ၊ facebook မှာ ရှဲကြမယ်၊ ရေရှည်တော့မကောင်းပါဘူး)
ရသမျှအနေအထားကနေ အလုပ်လုပ်ပြီး Sensitive ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို မကိုင်တွယ်ခြင်း… စသည်ဖြင့်ပေါ့
အဲဒါတွေကို ပြည်သူဖက်ခြမ်းက Hard Liner အချိုက ပျော့တယ် မပြတ်သားဘူးဆိုပြီး မကြိုက်သူရှိသလို ဒေါ်စုဘာလုပ်လုပ်ထောက်ခံတဲ့ Hard Liner ဒီမိုတချိုကလဲ ဇွတ်မှိတ်ထောက်ခံနေတာလဲရှိတယ် (ဒေါ်စုရဲ့ Soft လမ်းစဉ်ကိုမဟုတ်ဘဲ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောက်ခံနေတာမျိုး).. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောချင်တာက တချိန်က သိပ်ခေတ်မစားလှတဲ့ Soft လမ်းစဉ် ကျယ်ပြန့်လာတာ ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်မဆိုးလှဘူး လို့ပဲမြင်မိပါတယ်..
နောက်ဆုံးအပိုင်းက အတိုက်အခံ (NLD) နဲ့ ပြည်သူထဲက Hard Liner တွေပါ.. ဒီကြောင်းကိုမပြောခင် ပြောချင်တာတစ်ခုက ကိုယ်ကိုတိုင် မနေ့တနေ့က အထိ Hard Liner ဖြစ်လေတော့ Hard Liner တွေကို အမြာ်မြင်နည်းသူ၊ အရှည်မမြင်သူတွေ စသည်ဖြင့် ပြောလိုရင်းမဟုတ်ပါဘူး.. အပြောင်းလဲ ဖြစ်ချင်ဇောနဲ့ သတိလက်လွတ်မဖြစ်စေချင်တာအဓိကပါ.. အခုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခုအပေါ်တုံပြန်ပုံတွေ၊ ခံယူချင်တွေ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Hard Liner တွေမနည်းလှတာတွေရပါတယ်.. လူအများ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရည်ရွယ်ချက်၊ဦးတည်ချက်တွေလဲရောထွေးပါတယ်.. မြင်ရသလောက်ပြောရရင်
အချစ်အမုန်းအခြေခံတယ် (ချစ်တဲ့လူဖက်က အမြဲမှန်ပြီး မုန်းတဲ့လူဖက်က အမြဲမှား)
သံသယကြီးတယ် (ဦးသိန်းစိန် ဆုံးဖြတ်ချက်အကောင်းချရင်တောင် အမှတ်ယူတာ၊ဟန်ဆောင်တာသက်သက်လို့မြင်တယ်)
အကောင်းမြင်စိတ်နည်းသွားတယ် (ဒေါ်စုနဲ့ NLD ကို အခုချက်ချင်း သမ္မတ နေရာ၊ အာဏာပေးရင်တောင် နှစ် ၂၀ နောက်ကျပြီးမှ ပေးတယ်၊ မကျေနပ်ဘူးဆိုတာမျိုးရှိမယ်)
Role ကိုသိပ်ထဲ့ မတွက်ဘူး (အကောင်းနဲ့ အဆိုး နှစ်မျိုးပဲ မြင်မယ်)
အဃာတ များနေမယ် (တိုင်းပြည်အကျိုးရှိ မရှိဆိုတာထက် တစ်ဖက်အုပ်စုကို တိုက်ခိုက်ချင်တာများနေတယ်)
တချို့ Hard Liner တွေဆို အာဏာရှင်ဟောင်းတွေကို တရားစွဲချင်တာတို့၊ ခရိုနီတွေကို ဆွဲစိချင်တာတို့၊ Revolution ဆန်ဆန်သွားချင်တာ တွေ တွေ့ရပါတယ်.. ဒီသဘောကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကအားမပေးပဲ စားပွဲဝိုင်းပေါ်ကနေ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းသွားဖို့ အားသန်လို့သာ အခုတော်တော် ငြိမ်သွားတာလို့ပြောရမယ်..
အမှန်တော့ နဂိုကတည်းက ပြည်သူအများစုဆီမှာ အကျိုးရှိမယ့် Constructive Idea တွေ၊ ဒီခရီးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ guide line တွေထက် တဖက်အုပ်စုကို ဘယ်လို တိုက်ခိုက်မယ်၊ လှောင်မယ်ပြောင်မယ်ဆို တာက ပိုအားသန်နေပါတယ်.. စာပေဟောပြောပွဲလိုနေရာမျိုးမှာတောင် Strategy ဆန်ဆန် အကြံဥာဏ်တွေ၊ အလားအလာ Vision တွေထက် အတိတ်တုန်းက အရင်အစိုးရမှားခဲ့တာတွေ အပြစ်တွေထောက်ပြတာမျိုး၊ သရော်တာမျိုးကို ပိုသဘောကျ၊ ပိုလက်ခုပ်သံရလေ့ရှိပါတယ်.. အဲဒါကြောင့်လဲ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်လေ့လာသူ တွေထက် သီးလေးသီးအငြိမ့်အဖွဲ့ လိုမျိုးကို လူပိုကြိုက်ကြတာပဲလိုပြောရပါမယ်.. မီဒီယာတွေဆိုရင်လဲ နိုင်ငံရေးနဲ့ပါတ်သတ်လို့ ပြည်သူကို ဦးဆောင်လမ်းညွန်မှုတွေလုပ်တဲ့အဖွဲ့က နည်းပြီး အများစုက ငါးပွက်ရာ ငါးစာချတဲ့သဘော ပြည်သူ့အကြိုက် လိုက်အစိုးရအဖွဲ့ကိုလှောင်တဲ့ ကာတွန်းတွေ၊ဖွတဲ့ အင်တာဗျူးတွေ တွေ့လာရပါတယ် (ဆရာအော်ပီကျယ် လက်ရာမျိုးတွေလို ပညာပါ၊ တွေးစရာလေးပါတာမျိုးဆို ကောင်းပါတယ်).. ဒီနေရာမှာ ပရိတ်သတ်က တောင်းဆိုလို့ပါဆိုပြီး ပေါတောတောကားတွေပဲ လှိမ်ရိုက်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်လောကနဲ့ သဘောချင်းတူမလားပဲ.. ဒီပုံစံ တဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာရင် တချိန်ကအစိုးရသတင်းစာတွေမှာပါဘူးတဲ့ ဒေါ်စုဘာလုပ်လုပ်လှောင်ပြောင်သရော်ထားတဲ့ ဝါဒဖြန့် ကာတွန်း၊ ဆောင်းပါးတွေလောက် အဆင့်နိမ့်သွားပါလိမ်မယ်..
ဖြစ်စေချင်တာက ဟိုဖက်ဒီဖက် Hard Liner အင်အားစုတွေကနေ Soft တွေဖြစ်လာဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ပြည်သူ၊မီဒီယာ အကုန်လုံး ကဦးတည်စေချင်တာပါ.. ဒီမိုကရေစီ ခိုင်မြဲပြီးသား အမေရိကန်လို နိုင်ငံမှာ တစ်ဖက်ပါတီကို အမှားထောက် သိက္ခါချ တာမျိုးက ကိစ္စမရှိလှပါဘူး.. ကိုယ်ဆီမှာတော့ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် အပြတ်ရှင်းလို့မရတဲ့ အခြေအနေမှာ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ ချော့ခိုင်း (အပြန်အလှန်) ကြရမယ့် အခြေအနေပါ..
ဒါပေမယ့် အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ အကောင်းမြင်ဖို့တွေ၊ Soft ဖြစ်ဖို့တွေ၊ ချော့ ဖို့တွေအကုန်လုံးကို တော့ သတိ နဲ့ ပြန်ချုပ်ရပါမယ်.. ဒေါ်စုပြောခဲ့တဲ့ သတိကြီးစွာနဲ့ အကောင်းမြင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားမျိုးအတိုင်းပါ.. အချိန်မရွေး အခြေအနေပြောင်းသွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သတိ၊ ဘာ အကြောင်း လုပ်ရင် ဘယ်လို အကျိုး ရနိုင်တယ်ဆိုတာ တွေးတတ်တဲ့ သတိပါ… ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သတိကြီးတဲ့ Soft Liner တွေ အများကြီးလိုအပ်တယ် ထင်ပါတယ်..
ပီးရင် ဆော့ဖ်ပါဝါနဲ့ ဟာ့ဒ်ပါဝါ ဘက်ပါ ကူးအူးမာလား ဟင်င်င်င်င်
.. ကူးတော့ပါဘူး.. ဒီတင်ရပ်ပါဘီ..
ခေါင်းစဉ်ကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံး ဆိုးတဲ့ လိုင်နာ အကြောင်း ရေးမယ်မှတ်နေတာ။
ဒါမဲ့ အဲဒီ သတိကြီးတဲ့ Soft-Liner တွေကို အားမရတဲ့ ဘေးထိုင်ဘုပြော နေသူတွေက အများကြီးကလားးးး
Hard-Liner တွေတုန်းက ကြောက်ပြီး မပြောရဲသမျှ……..။
နောက်တော့မှ ငါလည်း မလုပ်တတ်ဘူး ဆိုတာမျိုးတွေ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်/ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင် ဒါလူဆိုး၊ ဒါမင်းသားဆိုပြီး အရင်သတ်မှတ်ပြီးမှ စိတ်အေးအေးကြည့်တတ်ကြတဲ့ လူမျိုးဆိုတော့ကာ
မင်းသမီးနဲ့ လူကြမ်း အဖွဲ့ကို။
အဲဒါမှပဲ စိတ်သက်သာတယ်။ ငိငိငိ
Resident Evil တို့ Ultraviolet တို့လို မင်းသမီးက လူကြမ်းတွေ အကုန်လုံးကို Solo ကြမ်းသွားတဲ့ ကားမျိုးတွေလား..
ကိုဇော်သန့် ကြီးရဲ့ 
နိုင်ငံရေး အတွေး /အမြင်တွေကို
ဘာဘာညာညာ ဝင်ဆွေးနွေးဖို့ အထိ
အရည်အချင်း မရှိသေးလို့ 
ယူသင့်တာ ယူဖို့ သာ ကြိုးစားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အတွေး ကို အရေးရှင်းရှင်းနဲ့ ရေးသားတင်ပြ သွားတာကိုဖြင့်
အားကျ ငေးမော မိပါတယ်
.. အပေါ်ဆုံးကသာ နာမည်ကြီးတပ် မပြောရင် ဘယ်သူ့များချီးကျူးနေတာလည်းလို့ ဘယ်ညာကြည့်ပြီး အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေမှာပဲ.. ကျွန်တော်ရေးတာတွေက တလေးတစားစောင့်ဖတ်စရာ အဆင့်ထိမရှိပါဘူးဗျာ.. ကိုယ့်ရှေ့ရှေ့က အတွေးကောင်းအရေးကောင်းတဲ့ သူတွေရဲ့စာတွေကို ဖတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်တွေးကြည့် ရေးကြည့်တဲ့ ဝါသနာရှင် အနေနဲ့ ရေးတာပါ.. ဖတ်ကောင်းတယ် ဆိုရင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဒီတစ်ခါတော့ စုံကန်ငြင်းဖို့ အချက်ရှာမတွေ့တာမို့ နောက်လာမဲ့ Post မှာ စောင့်ငြင်းပါမယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီ Post မှာ ဘာကို ကြိုက်ကြောင်းလေးပြောရင်း ထင်ရာ ရမ်းတီးပါရစေဦး။
အဲဒီ Statement လေးထုတ်ပြလိုက်တာ နဲ့ တင် ငြင်းမရဖြစ်သွားတာပါ။
အစွန်း ၂ဖက်သဘော သဘာဝ တွေ ကို ထောက်ပြသွားတာလဲ အင်မတန် ဆီလျော်ပါတယ်။
အလယ်မှာရှိနေတဲ့ Soft Liner တွေကိုလဲ မျက်စိထဲ မြင်ပါတယ်။
အများစု က ပညာတတ်တွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေပါ။
ဒီနေ့ အခြေအနေ မှာရှိတဲ့ သူတို့ အနေအထား ကို ကျွန်မ အမြဲလေ့လာနေမိတယ်။
သူတို့ ကြောင့် အခြေအနေတွေ ကောင်းသင့်သလောက်မကောင်းဖြစ်နေတာ လို့။
သူတို့ က တအား စကားဝဲ နေတော့တာကိုး။
(ဆရာ) နွမ်ဂျာသိုင်း ရဲ့ ဝတ္တုခေါင်းစဉ် ကို ငှားသုံး ရရင်ဖြင့်
အဝေးမှာ ပီပီပြင်ပြင် အော်နေတတ်တဲ့ ကျွန်မလား။
မြန်မာပြည်ထဲရောက်ရင် အလိုလို စကားဝဲ သွားပါတယ်။
.. အရီးရေ.. အလယ်ကလူ စကားဝဲတာ၊ ကိုယ်ကျိုးကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ကြောက်လို့ ဟိုဖက်ဒီဖက် ကူးကြတာ ကို Soft Liner လို့ မသတ်မှတ်စေချင်ဘူး.. စာထဲမှာလည်း ဒါမျိုးလူစုတွေက သက်သက်ရှိတယ် လို့ ရေးလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ Soft က ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက် ခိုင်မာပေမယ် ဆန့်ကျင်ဖက်အင်အားစုနဲ့ လိုအပ်သလို တည့်အောင်နေနိုင်တာ၊ အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာ၊ အလျော့အတင်းတတ်တာကို ဆိုတာပါ.. ဘာသာရေးနဲ့ တွဲ ဥပမာပေးရမယ်ဆို ကိုယ့် ဘာသာ ကို တကယ် သဘောပေါက်ပြီး ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ကိုးကွယ်တယ်၊ အဲ့လိုပဲ တခြားဘာသာဝင်တွေ၊ သူတို့ဘာသာတွေကို လေးလေးစားစားရှိမယ်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ရှင်တွဲနေလို့ရကြရင် Soft Liner တွေပေါ့.. Hard Liner ဆိုရင်တော့ ဒါနဲ့ ပြောင်းပြန်ပေါ့..
.. အခြေအနေတွေ ကောင်းသင့် သလောက်မကောင်းသေးတာတော့ ဟိုဖက်က Hard Liner တွေ ကျန်သေးလို့ပါ ..
သူကြီးဖတ်မိရင်တော့ စတစ်ကီလုပ်ပေးအုံးမယ့် ပို့စ်ပါပဲ။
အစိုးရဖက်က hard တွေကတော့ အားလုံးသိပါတယ်။
NLD ဖက်က hard ကတော့ ဦးဝင်းတင်ပါမယ်ထင်တယ်။
အခုနေမှာတော့ soft တွေများမှ coalition လုပ်လို့ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ရာဇ၀င်ထဲမှာ ?ရာဇသင်္ကြန် လို့ထင်ပါတယ်၊(ကိုစံလှကြီးရေ ကူပါအုံး)
ဘုရင်ကို ပန်းကန်အနားပဲ့နဲ့စားပြပြီး ပန်းပွတ်သည်သားမြေးတွေကြီးပွားနေလို့ ပန်းကန်ကောင်းနဲ့ မစားနိုင်တော့ပါလည်း ပြောလိုက်ရော၊ပန်းပွတ်သည်မြေးဘုရင်က အမျက်တော်ရှပြီး မဲဇာ အပို့ခံလိုက်ရတယ်လေ။
လမ်းမှာ လှေနဲ့သွားရင်း လေတိုက်လို့ သစ်ပင်ကြီးတွေ လဲပြိုတာ မြင်တော့ ငါလည်း ပန်းပြားပင်လိုမကျင့်မိ၊သစ်ကြီးဝါးကြီးလိုကျင့်မိလို့ ပျက်စီးရတယ်လို့ ညည်းသတဲ့။
camouflage power (နေရာလိုက်လို့ အရောင်ပြောင်းနိုင်စွမ်း)
ဟာ ကောင်းသောစေတနာနဲ့ ပြုမူမယ်ဆိုရင်တော့ တက်လမ်းရှာရာမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ရန်ကုန်ဘဆွေရဲ့ စပယ်တို့ခေတ် ၀တ္ထုကို သတိရမိပါတယ်။
(ရွာထဲလည်း တစ်ခါတုံးက မန့်မိပါတယ်)
၀တ္ထုအချုပ်ကတော့ ဘုရင်ကို သစ္စာခံတဲ့သူနဲ့ တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့တွက် တက်လာသမျှ ဘုရင်လက်အောက်မှာ
ကောင်းတာတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိသူ ချစ်သူနှစ်ဦး အကြောင်းပါ။
.. ဦးဝင်းတင် အနေနဲ့ သူကြုံရတဲ့ အတွေ့အကြုံရ ဒီလိုဖြစ်နေမှာပါပဲ.. ကျွန်တော့် အနေနဲ့ သူကို ဝေဖန်နိုင်လောက်တဲ့ အနေအထားမှာ မရှိလို့ မပြောသာပါဘူး.. ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ Hard Liner ဆိုလည်း သူ့တစ်ကိုယ်ရည် အနေနဲ့ သာ တင်းမာတာဖြစ်ပြီး ပါတီရဲ့ သဘောဖြစ်တဲ့ Soft သဘောထားကို ဝင်ဆန့်ကျင်တာမတွေ့ရတာတော့ ချီးကျူးပါတယ်..
.. ဝင်အားပေးသွားတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
Soft Liner, Hard Liner ဆိုတာ ခံယူချက်ဘယ်လောက်ခိုင်မာတယ်၊ ယုံကြည်ချက်ဘယ်လောက်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာနဲ့မဆိုင်ပဲ အခြေအနေအပြောင်းအလဲကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်နိုင်သလဲ၊ ဆန်ကျင်ဖက်အင်အားစုတွေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ဆံရှင်သန်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ပိုဆိုင်ပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သတိကြီးတဲ့ Soft Liner တွေ အများကြီးလိုအပ်တယ်
.. ပြောသာပြောရတာပါဗျာ.. တကယ်တော့ Soft Liner လည်းဖြစ် သတိလည်း ကြီးဖို့ ဆိုတာ သိပ်တော့ မလွယ်လှဘူး.. ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ပညာရေး၊ တိုင်းပြည်အတွက် စေတနာ၊ အရှည်ကြည့်တတ်မှု စတာတွေ လိုတာပဲ.. လောလောဆယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြီးရင် နောက်ထပ် ဘယ်သူတွေ ရှိသေးလဲ စဉ်းစားနေမိတယ်..
ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ပညာရေး၊ တိုင်းပြည်အတွက် စေတနာ၊ အရှည်ကြည့်တတ်မှု တွေမှာ
ပြည်ပရောက်ထဲက ဒေါ်မီမီဝင်း၊နောက်မျိုးဆက်ထဲက ခင်မမမျိုး၊တို့ရှိပါသေးတယ်။(အကြံပေးလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့သူတွေ)အဲ..အေသင်ဒီမိုနဲ့တောင်ရောကုန်ပြီ။
.. ဟုတ်ကဲ့ဗျ.. ရှိတော့ရှိမှာပါ.. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပေါ်လာကြမှာပါ..
.. အတော်လေး စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းလို့ download ဆွဲသွားပါတယ်..
လက္ခဏာပညာ အလိုတော့ ဟက်လိုင်းဆိုတာ ဦးခေါင်းလမ်းကြောင်း ညဏ်လမ်းဂျောင်းကို ခေါ်တယ်…. နှလုံးသားလမ်းကြောင်းလည်း ရှိသေးတယ်… သူတို့နှစ်ခုက တခုနဲ့တခု အထက်အောက် ပြိုင်နေတယ်… ဆော့လိုင်းကတော့ ကျန်းမာရေးလမ်းနဲ့ အသက်လမ်းပေါ့ဗျာ… ဘယ်လောက် ကမြင်းဂျောထသလဲ.. ထလို့ရအုံးမလဲ သိနိုင်တယ်….။ အခြားအရေးကြီးတဲ့ ကံလမ်းနဲ့ အောင်မြင်ရေးလမ်းတွေဆိုတာတွေလဲ ရှိသေးသဗျို့…
ပေါလက်တစ်ကဲ ဆိုင်းရင့်တတ်မှ မဟုတ် လက္ခဏာ ပညာနဲ့လည်း ဟက်၊ဆော့ ခွဲနိုင်ဗာဂျောင်း…. :p
.. ဝင်ရောက် အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကျွန်တော် တတ်ရောင်ကားရေးနေတာ မျက်စိ စပါးမွှေးစူးစရာ ဖြစ်နေပေမယ့် စီနီယာကြီးတွေမှ သည်းခံ ဖတ်ရှုသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း..
ဟယ် ဘွားဒေါ်ကို အားမရတဲ့ ကကြောင် ဒီစာကို ဖတ်မှဖတ်ပါ့မလားလို့ ပူလိုက်ရတာ
သဘောထား တင်းမာသူ ပျော့ပျောင်းသူ
အစိုးရအဖွဲ့တွေမှာရော ပါတီတွေမှာရော နောက် လူထု
တွေမှာပါ ဒီအသုံးအနုံးတွေ အသုံးပြုနေတာတွေ့နေရတယ်။
အဲဒီလို သတ်မှတ်ချက်ကို ဘယ်သူတွေကသတ်မှတ်လေ့ရှိသလဲ?
သတ်မှတ်ထားမူ့အပေါ် မှာရော ထောက်ခံမူ့ အတိုင်းအတာဘယ်လောက်
%လိုအပ်သလဲ? အဲဒီသတ်မှတ်ချက်တွေကို လူထု အများစုကလက်မခံရင်လဲ
ဆက်ပြီး တင်းမာသူ ပျော့ပျောင်းသူ ရယ်လို့ ဆက်ခေါ်သင့်လား?
နောက် သတ်မှတ်ခံရသူ အဖွဲ့ အသင်း ပုဂ္ဂိုလ် တဦးချင်းစီ က လက်မခံနိုင်
ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ပဲ နားမလဲတာ မသိတာမို့ မေးခွင့်ပြုပါဗျာ။
.. အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဒီမေးခွန်းမျိုး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မေးချင်တာဗျ.. ဘယ်သူ့မေးရမှန်းမသိလို့.. နိုင်ငံရေးမှာ လစ်ဘရယ်၊ ကွန်ဆာဗေးတစ်၊ နီယိုကွန်ဆာဗေးတစ် ဘာညာ သတ်မှတ်ကြတယ်ဗျာ.. ကိုယ့်ကိုကို ကျုပ်ကဖြင့် လစ်ဗျယ်၊ ကိုယ်ကတော့ နီယိုကွန် စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ကြတာလား.. ဘေးကလူအများက တံဆပ်ကပ် သတ်မှတ်ကြတာလား စဉ်းစားဖူးတယ်.. နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တယ် ထင်တာပဲဗျာ.. နားလည်တဲ့လူရှိရင် ဝင်ဖြေပေးသွားကြပါဦး..
.. အခုစာစုထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပျော့ပြောင်းသူ၊ တင်းမာသူ စတာတွေကတော့ ကျွန်တော့် အမြင်နဲ့ အာဘော်သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ဘာ Reference နဲ့မှ ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး.. ကိုမင်းမင်း မေးတာ ဖြေရရင်လည်း ဒီသဘောပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်.. သတ်ဆိုင်ရာ သတင်းဌာန၊ ပါတီ၊ လူတစ်ဦးချင်း အမြင် အရပဲ ကိုယ် မြင်သလို သဘောထားတင်းမာသူ၊ ပျော့ပြောင်းသူ စသည် ဖြင့် ယျေဘူယ သဘောပြောကြတယ်ထင်ပါတယ်.. တခါတလေ သတင်းဌာနတွေ ကတော့ သူတို့ ပုံဖော်ချင်သလို တံဆပ်ကပ်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်.. ဥပမာ လွတ်လပ်ရေးရခါနီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းအလုပ်လုပ်တုန်းက ကိုယ့်အမြင်အရဆို Soft Liner သမားလို့ သတ်မှတ်ချင်ပေမယ့် ကွန်မြူနစ်သတင်းစာတွေကတော့ အချောင်သမား ဆိုပြီး စွတ်စွဲတယ်.. အဲ့လိုမျိုးပေါ့.. နောက်ပြီး ကျွန်တော့် စာထဲမှာ ရေးထားသလို မျဉ်းတစ်ကြောင်းရဲ့ ဟိုဖက်ဒီဖက် လိုမဟုတ်ပဲ အရောင် အနုအရင့် ဆန်ဆန်ကွဲသွားတာဆိုတော့ ဘယ်နားက စပြီး Soft Hard ခွဲမလည်းဆိုပြီးပြောရခက်ပါတယ်.. လူအများစု အတည်ယူတာက အမှန်လို့ပဲ ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ် (ကာယကံရှင်ကတော့ ငြင်းရင်ငြင်းမှာပေါ့လေ).. % နဲ့တော့ ဖြတ်မပြောတတ်ဘူးဗျာ.. အဲ့လို သီအိုရီမျိုးတော့ မရှိဘူးမှတ်တာပဲ..
Matrix ကြီး ဆွဲထုတ်ပြီး X- ၀င်ရိုးပဲရှင်းသွားတယ် Y- ၀င်ရိုးကျ ချန်သွားတယ်..
သဂျီးတို့ လျှိုပုံ …ပြောဘာဒယ်..
.. ကောင်းဗျာ.. ရှင်းသွားတာပဲ.. ကျွန်တော် ရေးတာမှ ရှုပ်နေသေး..
ကျွန်မ ဆိုလိုချင်တာက Soft Liner ဖြစ်ချင်နေသူတွေ၊ ဖြစ်သင့်သူတွေက ရှေ့ကို ရောက်ရင် စကားဝဲ ကုန် ကြသလားလို့ပါ။
သူကြီး ပုံမှာ မြန်မာပြည်က မျက်နှာ တွေ ထည့်ကြည့်ကြစို့။
ဒါမှ ဖယ်ရပိုလွယ်အောင်။ Sorry ….. ဖတ် ရပိုလွယ်အောင်။ (စကားဝဲ သွားလို့ပါ)
.. ဒါတော့ဟုတ်မယ်.. စကားလေး နည်းနည်းဝဲမှ ချစ်မွှေးပါတာကိုးဗျ.. ဒဲ့ကြီး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာပြော၊ ကိုယ်သောက်မြင်ကပ်သမျှတွေပြော ကြရင် အာဇာနည်နေ့တွေကို နည်းလှမယ်မဟုတ်ဘူး..
.. စကားအဝဲလွန်ပြန်တော့လည်း ကြာရင်လူမလေးစားတော့ဘူး.. အဲ့တော့ ကြားဖူးတာက နိုင်ငံရေးမှာ စကားကို ချိုချိုပြောပါ၊ ဒုတ်ကြီးကြီးဆောင်ထားပါတဲ့..
.. သူကြီး ပုံ ကတော့ သူကြီးတာဝန်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း.. (အိမ်ကျမှ ကိုယ်ဟာကို တိတ်တိတ်လေး ဖြည့်ကြည့်တော့မယ်..)
ဘိရုမာ ပုံတွေ ထည့်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင့် …. ဘယ်သူမှ မလုပ်သေးဘူး မလား..
မှားတာမှန်တာထား နောက် ဗားရှင်းတွေ ကျရင် 不具合対応 လုပ်ပေးမယ်..(ဇာတိပြဘီ)
ဒီ Data Visualization ကို ကိုယ် အရင်လုပ်ခဲ့ဒါဟ ဆိုပီး
ဘယ်နေ့ဘယ်ရက် က မန်းဂဇက် ပရောဒတ်ဆိုပီး သမိုင်းကျန်ဒါပေါ့ …
ရွာသူားတွေက. ညှိကြတိုင်ပင်ကြပြီး.. လူကြီးတွေကိုကြည့်ကြက်နေရာချပေးလိုက်ပေါ့…
ရွာထဲမှာ နိုင်ငံရေး အမြင်သင်တန်းလေးတွေပေးရင် ကျုပ်အရင်ဆုံးလာတက်မယ်ဗျာ..။
.. မနောက်ပါနဲ့ဗျာ.. ကိုယ်ဟာကို တတ်ရောက်ကားတွေ ရေးတတ်လွန်းလို့ ဖတ်တဲ့လူမျက်စိနောက်မှာ စိုးနေတာကို.. ဆြာအာဂ ဝင်လုပ်မှပဲ ခဲနဲ့ပါထုချင်စရာဖြစ်တော့မှာပဲ.. နောက်ပြီးကျွန်တော်က ကိုယ့်အမြင် သူ့အမြင် ရှဲ လုပ်ချင်ရုံပါ..
ကိုဇော်သန့် ရှင့် …
တခုခုတော့ လွဲနေပီထင်တယ် …
ကျမ သိသလောက် ထပ်ဖြည့်မိတာကို ……
အာ … ဟူး …
ဆိုတော့ …. ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မြန်မာဟာ မြန်မာဘဲမို့ …
မှားခဲ့သည်ရှိသော် …. ခွင့်လွှတ်ပါ …
ဆိုတော့ ဒီနေ့ ရေးနေ ပြောနေသူများ ၂၀၂၀ မလွန်ခင် စာမျက်နှာ တခုခုပေါ်မှာ တွေ့ချင်မိရဲ့
ဟိုက် သူများ သားသမီး ကောင်ရာ ကောင်းကြိုး ရေးထားတဲ့ ပို့စ်ကိုမှ ကွန်းမင့်က မှားဝင်သွားတယ် …
ဆိုတော့ ကိုဇော်သန့်ရေ …
တော့ပစ်ခေါ်မလား အစဆွဲထုတ်ကြေးဆို အရှည်ကြီးရယ် …
ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် ..
Analysis လုပ်ထားတဲ့ သဘော ..
ဇဂါးမစပ် .. မော့များ အက်ဒမင်များ အပေါ်က ကွန်းမင့် ဖျက်ပေးကြပါကုန်တော် …
အပေါ်က ကွန်မန့်က မှားဝင်သွားတာဆိုတော့ အောက်က အခု ကွန်မန့်ကတော့ အတည်ပေါ့နော်.. ဒါပေမယ့် ဘာပြောချင်တာလဲ သဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်နေတယ်.. ဘယ်အစကို ဆွဲထုတ်မှာလဲဗျ.. ကျွန်တော်က လူသစ်မို့လို့လားမသိဘူး.. ဒီ ရွာရဲ့အသုံးအနှုံးတွေကို နားစိမ်းတာလဲဖြစ်မှာပါ..
ရေးချင်တာ ဆက်ရေးးး ပါ။
ဘယ်သူ့ မှ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးတာမဟုတ်ရင် ကိုယ့် လိပ်ပြာကို လုံရင် ပြီးတာပဲ။
ရွာက ဒီ လိုပါပဲ။
လူ အမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေပေါ့။ ကိုယ့် အယူအဆ ကိုယ် ဝင် ဆွေးနွေးကြတာပဲ။
ကိုယ် သန်ရာ သန်ရာပေါ့။
ဘယ်သူ က ဘယ်လိုဆိုတာ နားလည် မသွားမချင်း ဘာဆိုလိုချင်လည်း မသိတတ်ပါဘူးးး
(ကျုပ်ဆို စဝင်တဲ့ ပို့(စ) ခိုင် ဆို တာ သူကြီးမှန်းကို မသိဘူး၊ အဲဒီလို)
အပြင်မှာ သေနတ်ချင်း ယှဉ်ပစ်လောက်အောင် ရန်သူတွေ ဖြစ်သွားတဲ့သူတော့ မတွေ့ဘူးသေးပါဘူးးး
ဆက်ငြင်းးး (အဲလေ) ဆက် ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။
.. ရေးပါလည်းပြောသေး.. ဘာမှ တွေးမနေနဲ့ ဆိုတော့ မတွေးပဲ ဘယ်လိုလုပ်စာရေးမလဲဗျ..
.. နောက်တာပါ..ထားပါတော့.. တွေးမိသမျှတွေ တော့ဆက်ရေးပါမယ်.. နိုင်ငံရေးအကြောင်းဟိုရေး ဒီရေး ရေးတာဆိုတော့ အမျိုးမျိုးဝင်ဆွေးနွေးကြတာကောင်းပါတယ်.. အကုန်လုံးထောက်ခံပါတယ် ဆိုတာထက် အမြင်မတူတာတွေ၊ ငြင်းချင်တာလေးတွေ အပြန်အလှန်ပြောရဆိုရတာကိုက အခုလို post တင်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲဟာ..
ကိုဇော်သက်ရေ အိုက် ခင်ခက်ခက်ခေါဆိုဒါ ရွာပြင်ခီနခီန အထုတ်ခံရဒဲ့ ရွာ့သပုန်ပါ…
.. ရွာ့သပုန်ဆိုတော့.. နောက်ထပ် ရွ ပုလိပ်ကြီးတို့၊ ရွ ကွမ်းတောင်ကိုင်တို့၊ ရွ မျက်နှာဖုံးတို့၊ ရွ ဆော် တို့ကော ရှိသေးလား.. ရွ သူဂျီးကိုတို့ တွေဖူးပီးဘာဘီ..
မနေ့က ဒေါ်စုရဲ့ စကားလေးပြန်လည်ကြားယောင်မိတာက တစ်သွေး၊တစ်သံ၊တစ်မိန့်နဲ့ ညီညွတ်နေရင်တော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့…ဆိုတော့ကာ …ယနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်း ပြဿနာမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလည်း အဲဒီ Hard Power နဲ့
Soft Power တွေကို အချိုးညီစွာအသုံးမချနိုင်လို့ ပြဿနာတွေပိုမိုကြီးထွားစေခဲ့တဲ့ သာဓကတွေရှိနေတာတွေရပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဗားမား သမ္မတအဖြစ်စတင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရစဉ်အချိန်တုံးကလည်း သူ့ကို Soft Power သမားအဖြစ်မြင်ပြီး၊အမေရိကန်နိုင်ငံရေးကို ဦးဆောင် ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ခဲ့ကြတယ်…
ဒါပေမယ့် တစ်ကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ အိုစာမာ ဗင်လာဒင်ကို ချေမူန်းပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်…ဥပမာ အနေနဲ့ပါ… ဆိုလိုတာက အချိုးညီစွာနဲ့ အသုံးချနိုင်မူပါပဲ…
အားလုံးတူနေမယ် ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံရေးလို့ခေါ်လို့ရမယ်မထင်တော့ပါဘူး…အားလုံး လက်ညှိးထောင်ခေါင်းညိတ်တွေပဲဖြစ်ကုန်မှာပေါ့…လက်ရှိ ကျနော်တို့မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဟာအကောင်းဆုံးလို့ ပြောလို့မရသေးပေမယ့်…ဒီအတိုင်း ဆက်လက်ပြီး ညီညီညွတ်ညွတ် နဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ မဝေးတော့တဲ့အချိန်မှာ အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဟုထင်မြင်မိပါတယ်….
ကိုဇော်မင်းရေ.. အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အခုကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ Hard Liner, Soft Liner လိုပဲ ကိုဇော်မင်း ဆွေးနွေးသွားတဲ့ Hard power Soft power ဆိုတာလည်း လက်ရှိနိုင်ငံရေးတွေမှာ အာရုံအတော်စိုက်ခံနေရပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ဆီလည်း သိပ်မကြာခင် hard power soft power ပြည့်စုံလာလိမ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..